Esemthethweni: Yurophu, Kumbindi Mpuma Afrika, i-Russia, i-Intellectual property elicetyiswayo Umthetho firms, abaqondisi-mthetho - Zonke abaqondisi-mthetho kwi-Russia! Oyena lawyer portal.
Esemthethweni: Yurophu, Kumbindi Mpuma Afrika, i-Russia, i-Intellectual property elicetyiswayo Umthetho firms, abaqondisi-mthetho
Victor Naumov ufumana enye iqhosha nani
Baker McKenzie - CIS, Limited ibonelela 'i-ezibalaseleyo yayo yonke inqanaba inkonzo', kwaye iqela 'ubani okulungileyo ukuqonda inkqubo yolawulo kwi-Russia'Ifemi advises kwi epheleleyo osasazo ka-IP imicimbi kuquka urhwebo marks, copyright, antayi-counterfeiting kwaye igama leqela imiba. Iphawula iqukiwe isithethi kuba Nissan Motor kwi-trade phawula ukuba semthethweni mba, kwaye nto Les Laboratoires Servier yakhe ndithi ukuba leyo lakuyenza ingabi semthethweni Bravadin, i-ngamazwe urhwebo marko ubhaliso kwi-pharmaceutical eli candelo. Senzo intloko Eugene Arievich 'iza phezulu ezingeyo-esezantsi iindlela complex imiba', kwaye ingcebiso Darya Ermolina kanjalo elicetyiswayo. Bryan Cave Leighton Paisner (Saserashiya) LLP ke 'responsive' iqela 'rhoqo iinjongo ukufumana nzulu ukuqonda umxhasi ke ishishini iinjongo', 'ngexesha ukusika edge wenkundla senzo, umthetho kwaye kwimakethi iimboniselo'. Ukuziqhelanisa ngu ebelikhokelwa Elena Trusova, ngubani, ihamba kunye Evgeny Oreshin, kutshanje advised Nike kwi umqolo wezorhwebo marko kwaye copyright imiba malunga yayo izibhengezo phulo. Yabalawuli associate Anton Nefedev iphatha intengiselwano olunxulumene IP imiba. A ekhaya grown Russian IP boutique Gorodissky ibambisana yayo headquarters kwi-Moscow, isebe kwi-ofisi Irussia Ukraine abali-isihloko phezulu izikhundla kwi-wonke umba umyalelo wokhuselo, ukulahlwa kwaye ukunyanzeliswa IP amalungelo. Eyona imida ingaba Us kwaye Kwakhona, kwaye enkosi ezikhoyo trustworthy womnatha ifemi limele kanjalo abaxhasi jikelele Eurasia. 'Ngamandla' iqela e Dentons 'ukwazi ngokukhawuleza ukuqonda imiba lisondele' kwaye 'sichaza Russian nemigaqo-nkqubo ngamazwe abaxhasi kwaye yangaphakathi isemthethweni njengesiqhelo kakuhle kakhulu'. Ebelikhokelwa Denis Voevodin, ifemi ngoku advises Gazprom kwi kwihlabathi liphela urhwebo marko prosecution iingxoxo, kwaye kanjalo uphatho eziliqela urhwebo marko ubhaliso imicimbi kuba Rosatom. Hogan Lovells (CIS) sele 'enye strongest IP iindlela ezilungileyo phakathi wamazwe ngamazwe firms kwi-Russia' yayo. 'kakhulu umxhasi - isisombululo-oriented, kwaye wenze okulungileyo kwimakethi iingqiqo'. Iqhosha macandelo ka-ugqaliso ziquka electronics, namajelo eendaba, life sciences ukutya kwaye beverages eli qela kutshanje represented McDonald ke ezininzi urhwebo marko kwaye okunyhashwa awodwa disputes ngokuchasene Russian wesithathu amaqela, kwaye ngoku advising Lego kwi-trade marko kwaye copyright ukunyanzeliswa iingxoxo kuwo Commonwealth ka-Geqe States (CIS). Senzo intloko Natalia Gulyaeva ngu 'elikhulu lawyer kunye isandi ishishini acumen'. Russian abaqondisi-mthetho-Intanethi ngu 'ingakumbi recognised kuba yayo ukomelela kwi-patent litigation norhwebo marko portfolio ulawulo kuba enkulu yehlabathi brands'. Eli qela kanjalo advises kwi counterfeiting imiba, nephepha kwaye unikezelo ka-IP amalungelo. Senzo intloko Pavel Sadovsky ngu 'iqaphele kuba yakhe eyomeleleyo ulwazi IP kwaye umthetho kwaye inkundla senzo'. Iqhosha abaxhasi ziquka Danone kwaye Enye indlela yokwenza Ulawulo. Ermakova, Stoliarova Partners, Patent-Arhente ibonelela 'high level iinkalo zobuchule ezahlukeneyo imiba' kwaye inikezela 'nika, oluneenkcukacha ingcebiso ekuphenduleni zonke izicelo'.
kwi-patent ukucinywa iingxoxo phambi CPD
Ifemi iphatha urhwebo marko kwaye patent registrations, yithi rhoqo limele abaxhasi kwi-administrative kwaye arbitral iimeko phambi Russian Kwegumbi kuba Patent Disputes (CPD).
Kwisithuba nje phawula, iqela acted kuba i-Isigrike cosmetics inkampani kwi meko enxulumene ukurhoxisa eziliqela mthethweni urhwebo marks.
Elena Ermakova jointly iintloko eli qela kunye Irina Stoliarova. E-Gorodissky Partners, notable umsebenzi iqukiwe nto-Russian confectioner Chocolate Kde kwi okunyhashwa awodwa imbambano wayekhusela Decor Rus ngokuchasene i-infringement intshukumo kwaziswa yi-a competitor kwaye nto Perfetti Van Melle kwi-trade marko infringement meko ezenziwe sesi sibini yi-obutsha malunga ayo 'NAME' marko.
Ukulawula iqabane lakho Valery Medvedev kuyacetyiswa ihamba kunye patent norhwebo marko lamagqwetha Sergey Dudushkin.
Gowling WLG ngu 'ukwazi ukukhombisa u-wonke uhlobo urhwebo marko mba' ayo iqela ngu 'highly responsive, kwaye ibonelela okulungileyo-umgangatho ingcebiso'. Kwiindawo iinkalo zobuchule zibandakanya urhwebo marko kwaye patent portfolio ulawulo, antayi-counterfeiting imicimbi, ummandla igama ubhaliso kwaye IP ukunyanzeliswa iintshukumo. Ukulawula iqabane lakho Udavide Aylen advises langaphandle karhulumente ngomhla we-zabo Russian kwaye CIS imisebenzi, kwaye Vladislav Ugryumov sele notable iinkalo zobuchule kwi-life sciences candelo, ingakumbi ngaphakathi pharmaceuticals kwaye yendalo ephilayo. KIAP (Moscow Lamagqwetha-Intanethi, Attorneys e Umthetho) 'uphendula ngoko nangoko, zonke izicelo' kwaye 'kubonakalisa eziphezulu inqanaba ulwazi kunye namava entsimini ka-IP umthetho, ngokubonelela aqinileyo, ushishino-oriented ingcebiso'. Daria Chernysh ligama leqhosha nani, kwaye ngoku advising Polaris kwi yayo urhwebo marko kwaye patent portfolio kuwo CIS kwaye ezinye iingingqi. 'Olomeleleyo iingcali' ngexesha Patent Umthetho Ifemi Yus ingaba 'kakhulu knowledgeable malunga yonke imiba IP kwi-Russia, baze bagcine ngokwabo phezulu ukuya kumhla yonke ebalulekileyo okwenzeke kwaye utshintsho'. Ifemi ke responsivenesss ngu 'highly impressive, kwaye lula iyahambelana nemigangatho yehlabathi'. Sergey Lovtsov iintloko isebe, apho kutshanje represented Ngamazwe Masis Tabak kwi-trade marko infringement meko ezenziwe sesi sibini yi-Fil Morris Brands. Pepeliaev Iqela ibonelela 'eliphezulu inqanaba elinolwazi inkxaso' kwaye 'a exabisekileyo iqabane lakho kwi-IP imiba'. Senzo intloko Valentina Orlova ngu praised kuba yakhe 'thorough uhlalutyo lomgaqo-complex imiba' kwaye 'iyanelisa inkxaso kuwo epheleleyo umqolo we ubhaliso iinkqubo'. Umsebenzi iphawula iqukiwe advising Rosatom kwi ezahlukeneyo patent registrations overseas, kwaye nto Richter Gedeon Nyrt. ALRUD Umthetho Ifemi ke iqela le 'attentive specialists' uphumelele psalms kuba ayo 'ulwazi, iinkalo zobuchule kwaye nzulu inqanaba IP amava', kwaye ayo 'ukukuthakazelela ukuba anike igalelo nangaliphi na iqonga'. Ifemi wenziwe iqwalaselekile esebenzayo kwi-NGAYO kwicandelo lezolimo, advising kwi-data localisation imicimbi, personal data umyalelo wokhuselo kwaye contentious imicimbi involving i-Roskomnadzor. Mariya Ostashenko advises kwi-IP ulawulo kwaye umyalelo wokhuselo, kwaye ingcebiso Larisa Lysenko 'rhoqo evaluates enokwenzeka imingcipheko kunye develops kakuhle amanyathelo ukusombulula nayiphi na imiba faced yi-umxhasi'. Andrey Gorodissky Partners sele 'nomdla kubaxhakamfula wezorhwebo marko umthetho' kwaye 'ukwazi ukuhlangabezana iinjongo kwaye ka-okulindelweyo abaxhasi unfamiliar nge-Russian iindlela'. Eli qela ke umxhasi-base iquka dibanisa ze computer, electronics, retail kwaye pharmaceutical iinkampani nje umsebenzi kuquka nto Groth Co kuzo iindibano kunye abanini bezinto efanayo urhwebo marks, kwaye isithethi kuba oyedwa entrepreneur kwi ubhaliso isicelo phambi Russian Patent Trademark-Ofisi.
Elena Gorodisskaya iintloko eli qela.
CMSwonderful' iqela 'rhoqo completes yonke imisebenzi kwi xesha, ingakumbi iimeko kakhulu urgent kwaye ixesha-elinovakalelo izicelo'. Iqhosha abaxhasi ziquka Syngenta Participations, Ecolab kwaye u-Microsoft eli qela okwangoku advising yokugqibela kwi copyright-zincwadi imicimbi kuwo ezahlukeneyo Russian imimandla. Anton Bankovskiy ligama qaphela. FBK Isemthethweni sele notable iinkalo zobuchule kwi-retail, pharmaceutical kwaye non-inzuzo ngamacandelo, kwaye counts ulungiso ye domestic kwaye langaphandle iinkampani phakathi yayo abaxhasi. Alexander Ermolenko iintloko ukuziqhelanisa, apho okwangoku isithethi kuba Marie Brizard Iwayini Koomoya uthotho longstanding urhwebo marko disputes. Kwisithuba nje phawula, Intellect-S ngempumelelo represented iimpahla zolwimi hosiery umenzi Conte Spa kwi-yommandla igama imbambano kunye ngqo competitor. Evgeny Shestakov iintloko isebe, apho sele nomdla ingoma imbali kwi-patent, copyright norhwebo marko disputes phambi kokuba ulungiso ka-mandla. Noerr ke 'reputable IP senzo' ebelikhokelwa Vyacheslav Khayryuzov kwaye Viktor Gerbutov, ngubani praised yi-abaxhasi njengoko ekubeni 'responsive, isebenziseke kwaye thoroughly knowledgeable'. Notable abaxhasi ziquka Yemiyalelo, Volvo kunye Nomdla Ngamazwe. Patentus sele nomdla ingoma imbali kwi-trade marko izicelo kwaye IP litigation, kwaye kanjalo advises kwi prosecution, unyanzeliso kwaye intengiselwano olunxulumene IP imiba. Ezine-iqabane iqela ngu ebelikhokelwa Dmitry Markanov, abo kutshanje represented Kazan esekelwe mzi-Europlast kwi patent infringement meko ngokuchasene Azimut. Squire Patton Boggs sele izakhono ezibalulekileyo kwi-IT and technology sephondo, yithi rhoqo advises qala amashishini kwi-IP amalungelo urhwebo marko kwaye patent ubhaliso lwe-software iimveliso. Olga Bezrukova iintloko eli qela, kwaye ngoku advising GM AvtoVaz kwi-trade marko kwaye copyright ubhaliso. Inkqubo Esemthethweni, Isemthethweni Ushishino, GC Magazine kwaye Kwi-Ndlu Lawyer isiganeko kwi-i-zurich azisa ulungiso lomthetho Senegal ke finest kwi-ndlu ingcebiso kunye celebrate i-ukwazisa le-GC Powerlist: Senegal Njengesiqhelo. Recognising kwi-ndlu ukwenza inguqulelo entsha, umgangatho kwaye ukugqwesha, GC Powerlist: Deutschland identifies i umboniso ka kakhulu influential kwaye innovative kwi-ndlu ingcebiso besebenza Germany. Recognising kwi-ndlu ukwenza inguqulelo entsha, umgangatho kwaye ukugqwesha, GC Powerlist: France identifies i umboniso ka kakhulu influential kwaye innovative kwi-ndlu ingcebiso besebenza France.
Abatshutshisi Kuthi Ukuqala Inspections Ezintsha Russian ii-ngos - Sputnik Ngamazwe
Snowden ay may mga legal na kapaligiran upang maging Russian mamamayan - abogado RT Balita sa buong Mundo